ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးလှမိုး 2021 Global Rural Development Forum သို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေး | Ministry Of Information
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးလှမိုး 2021 Global Rural Development Forum သို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေး
2021 Global Rural Development Forum ကို ယနေ့တွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ The National Rural Revitalization Administration မှ အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံ၍ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့် စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည်။
ဦးစွာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် H.E. Hu Chunhua က အဖွင့်မိန့်ခွန်း ပြောကြားပြီး Uzbekistan နိုင်ငံမှ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် H.E. Jamshid Kuchkarov၊ FAO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Dr. Qu Dongyu ၊ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Dato Lim Jock Hoi ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပြန်လည်ဆန်းသစ်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့မှ Administrator တို့က ဆင်းရဲမှုလျော့ချရေးနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ မြှင့်တင်ရေးအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ၊ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးလှမိုး က ဆွေးနွေးရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်များ ပြည့်မီစေရေး ဆင်းရဲမှုလျော့ချရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်၍ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရ အနေဖြင့် ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသူများနှင့် ထိခိုက် လွယ်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို အမြဲအလေးထားကာ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက် ဒေသများအကြား၊ တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် ပြည်နယ်များအကြား ဖွံ့ဖြိုးမှု ကွာဟချက် ကျဉ်းမြောင်းစေရေး အလေးပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးရေး မဟာဗျူဟာတွင်လည်း စီးပွားရေး ဟန်ချက်ညီညီ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျော့ချရေး လုပ်ငန်းများအား အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင် ရွက်ရေးတို့ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက် ရောဂါကြောင့် ထိခိုက်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးတို့ကို ပြန်လည်ကုစားနိုင်ရန်နှင့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး၏ လူမှုအကျိုးစီးပွားရေရှည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိပြီး လုပ်သာကိုင်သာရှိသော စီးပွားရေး ဝန်းကျင် တစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် မြန်မာ့စီးပွားရေး ပြန်လည်ဦးမော့စေရေးစီမံချက် MERRP ကို ရေးဆွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း။
ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ကျေးလက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် မိသားစုဝင်ငွေမြင့်မားရေး၊ အသေးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးကဏ္ဍ အခြေပြုသမဝါယမ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို အဓိကအလေးပေး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်သည့် ကျေးလက်အမျိုးသမီးများနှင့် လူငယ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ ကိုလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လူထုအခြေပြုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးသည်။
ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော နိုင်ငံများမှဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ အဆင့်မြင့် ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများနှင့် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များက ဆင်းရဲမှုလျော့ချရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်ရည် မှန်းချက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှု၊ အောင်မြင်မှုများ၊ အတွေ့အကြုံကောင်းများနှင့် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးပြောကြားကြ သည်။
ယင်းနောက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆင်းရဲမှုလျော့ချရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကဏ္ဍနှင့် ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်း ပတ်ဝန်းကျင် တိုးတက်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ ကဏ္ဍတို့ကို အုပ်စုများခွဲ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။